March 14, 2020 - CeleLove
March 14, 2020 CeleLove 0
မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ကုသိုလ် (၅) မျိုးကို ရအောင်ယူနည်း (၁) “ဒါနကုသိုလ်” မနက်အိပ်ယာထမျက်နှာသစ်တော့မယ်ဆိုရင် ရေဖလားထဲကို ရေထည့်လိုက်ပါ …။ မျက်စိနဲ့မြင်သာမယ့် ရင်ခေါင်းလောက်မှာ ရေဖလားကို ကိုင်ထားပါ။ ရေဖလားကို အပေါ်တော့ မမြှောက်လိုက်ပါနဲ့။ မေတ္တာပို့တဲ့အခါ အဆင်မပြေမှာ စိုးလို့ပါ။ …။ လက်ကကိုင်ထားတဲ့ရေဖလားနဲ့ ” မြတ်စွာဘုရား […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ကိုယ်ခံအား မြင့်စေသော အစားအစာ(၅)မျိုး
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ကိုယ်ခံအား မြင့်စေသော အစားအစာ(၅)မျိုး တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့က စတင် လိုက်တဲ့ C0v id19 ကူးစက်မှုဟာ ယ ခုအခါမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ကျော် ကို ပျံ့နှံ့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် W H […]
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဘာကြောင့် ရောဂါပိုး မတွေ့သေးတာလဲ?
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဘာကြောင့် ရောဂါပိုး မတွေ့သေးတာလဲ? “မိစ္ဆာ နဲ့ ဝိဇ္ဇာ လွန်ဆွဲပွဲ” မြန်မာပြည်မှာ ဘာ့ကြောင့် ရောဂါပိုး မတွေ့သေးတာလဲ …? ဒီကိစ္စက အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှတယ် …။ လောက လူသားတွေဟာ အကြောင်းအကျိုး ဖြစ်စဉ်ကို လက်ခံနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ အဖြေပေါ်မှာပါ […]
လက်ထဲမှာ ငွေပြတ်တာနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လုပ်ကြည့်ပါ
လက်ထဲမှာ ငွေပြတ်တာနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လုပ်ကြည့်ပါ ငွေ ပြတ်​သွားတဲ့ အခါဒီလိုလေး (ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ) လှူ ကြည့်ပါလား လက်တွှေအစွှမ်းမို့ပါ …. ။ ကြွေပန်းကန်​​နဲ့ဖြစ်​ဖြစ် လင်​ဗန်း​နဲ့ဖြစ်​ဖြစ် ​ပေါင်​မုန့်​ ၅ ခုထည့်​ ပေါင်​မုန့်​​ပေါ်ကို ကိတ်​မုန့်​၂ ခုတင် နို့ဆီ ဆမ်း.ပြီး […]